» सविन र रितासँग तारा र टेकराजको दोहोरी भिडन्त हुँदै
सविन र रितासँग तारा र टेकराजको दोहोरी भिडन्त हुँदै
२ श्रावण २०७८, शनिबार २०:१८
मकवानपुर, २ साउन । नेपालकै चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को उत्कृष्ट १६ छनौटपछि दोस्रो दोहोरी भिडन्त यही शनिबार हुँदैछ । दोस्रो दोहोरी भिडन्तमा शोकै चर्चित २ टिम टेकराज भण्डारी र तारा थापासँग रिता रावत क्षेत्री र सविन आचार्यले दोहोरी भिड्दैछन् । यी दुबै टिमले यसअघिको दोहोरी भिडन्तका क्रममा दर्शक र निर्णायकहरुबाट सर्वाधिक प्रशंसा पाएका थिए ।
शनिबार उनीहरुको प्रस्तुति पश्चात निर्णायकहरुले दिएको अंकबाट ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत दर्शक भोटको आधारमा अर्को शनिबार रिजल्ट हुनेछ । यी दुबै जोडीहरु गायक गायिकाकै रुपमा चिनिएका र लाईभ दोहोरीमा दर्शकहरुको मन जित्न सफल जोडीहरु हुन् । दुबै टिम बलियो भएकोले एकअर्कालाई पछि पार्न यो जोडीहरुले दमदार दोहोरी भिडन्त गर्नेछन् । यी दुई जोडीको यो कडा प्रतिस्पर्धामा कसले बाजी मार्ला त ? आखिर को जानेछ उत्कृष्ट ८ मा ? तपाईको विचारमा यी दुई जोडीमध्ये कुन जोडीको जित्ने सम्भावना बलियो छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट १६ मा पुगेका सोह्रौँ जोडी हुन् टेकराज भण्डारी र तारा थापा । उनीहरु वाईल्ड कार्डमार्फत उत्कृष्ट १६ मा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरु वाईल्ड कार्डमार्फत छानिएका चौथो जोडी हुन् । यसअघि उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्त अन्तर्गत उनीहरुले प्रकाश पराजुली र मिना बुढाथोकीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यस समयमा उनीहरुले निर्णायकहरुबाट जम्मा ५६१ अंक प्राप्त गर्दै ७ अंकको अन्तरमा पराजय भोगेका थिए । फिजिकल अडिसन र दोहोरी भिडन्तमा निक्कै चर्चा पाएकी तारा र टेकराज दुबै जना लाईभ दोहोरीमा चर्चित छन् । तारा बाग्लुङकी र टेकराज दैलेखका हुन् ।
त्यस्तै दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट १६ मा पुगेका आठौँ जोडी हुन् रिता रावत क्षेत्री र सविन आचार्य । यसअघि उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्त अन्तर्गत उनीहरुले श्याम राना र बबिता गुरुङको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । रिता र सविनले निर्णायकहरुबाट ५६८ अंक प्राप्त गर्दै जम्मा १४ अंकले दोहोरी जितेका थिए । रीता र सविन दोहोरी च्याम्पियनको फिजिकल अडिसनदेखि नै चर्चामा छन् ।
सविन र रिता लोकदोहोरी क्षेत्रका चर्चित गायक गायिका हुन् । दोहोरी च्याम्पियनमा निर्णायकहरुबाट सर्वाधिक प्रशंसा पाएकी रिताले लोक दोहोरी क्षेत्रमा नयाँ ईतिहास रच्ने दर्शक श्रोताहरुले अपेक्षा गरेका छन् । रिता र सविनले निर्णायकहरुबाट राम्रो अंक पाएका थिए । रिता दाङकी र सविन पाँचथरका हुन् । उनीहरु चर्चामा रहेका लोकदोहोरी गायक र गायिका हुन् । उनीहरु लाईभ दोहोरीमा पनि चर्चामा छन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामाग्री–